Home News Shirkii Baydhabo ka dib, siyaasadda Soomaaliya oo waji cusub gashay?
Shirkii dowlad goboleedyada ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka soo baxay go’aano aan lagu sheegin warmurtiyeedka. Go’aanadaas ayaa waxa ka mida in ayan wixii ka danbeeyay bisha May 16 keeda ayan wada shaqayn la yeelan karin Ra’isal Wasaare Xassan Cali Kheyre iyo xukumadiisa. Arintaan ayaa dhabar jab wayn ku ah dowlad Farmaajo. Waxaana muuqata in ay keeni doonto dagaal siyaasadeed oo cusub kasoo waji cusub la imaandoono.
Mid ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyadda ayaa inoo sheegay in dulqaadkii ka dhamaaday dhankooda. Waxa uu yiri “dowladnimaddii loo soo dhintay ayaaa koox yar oo aad moodo ciyaal dugsiyeed doonayaan in qaranimadii Soomaaliya ay horteena burburiyaan, cid ka yeelayso ma jirto waxaana diyaar u nahay in aan si toos ah ula dagaalno”
Waxaa muuqato in siyaasadda Soomaliya waji cusub gashay taas oo aan la ogaynin meesha ay ku danbeeyn doonto. Warmurtiyeedka maanta ka soo baxay shirkana waxa uu tusaale u ahaa jahawareerka ku soo food leh siyaasadda Soomaaliya.